Taariikhda My Butros » Sidee u soo jiitaan Naag ee riyooyinkiinna aad
Sidee u soo jiitaan Naag ee riyooyinkiinna aad
Ee waxaan ahay naag, qof dumar ah kuwaas oo u kacay taariikho badan oo ragga, ku soo laabtay maalmood shukaansi aan. Markaa waxaan helay in uu arko badan oo dabeecado kale duwan, fikrado iyo habab shukaansi. Waxaan u tegayaa inaan idinla wadaago qaadada gudaha oo ku saabsan waxa run ahaantii u shaqeeya rag shukaansi haweenka, iyo sidoo kale waxa si looga fogaado sida belaayadiina marka aad ka soo baxdo waxaa taariikhda ama la xidhiidhka naag.
Hubi in aad Layliska Dhisayaasha Attraksjon Kuwani
Iyada Romance – Waxaan haweenka noqoto jiitay in nin iyada oo aan dareemayo ku xirnaansho, tani waa wax yar ka duwan sida ay u shaqayso waayo, nimankii aad ugu Waxaan rumeysanahay. Sidaas awgeed, waxaan la kulmi kartaa nin oo aan dareensaneyn at dhan soo jiitay, si kastaba ha ahaatee ka dib markii uu waqti la inuu inoo taliyana ku guuleysan karo iyo guud ahaanba waxaan ku dhacaan isaga. Tani waxay dhacdaa waqti ALL ah. Haddaba isticmaalaan. Iyada Romance. Ha ka werwerin muuqan qadiimka – Ma aqaan naagta oo keliya ma dareemi doonaa yaab leh markii nin qaadataa daryeelka inaan noqdo nin jaceyl iyada la. Waxay dareemi doonto dadaalka dheeraadka ah ee aad tagto, ubaxa, jiidaya dib iyada kursi, helitaanka albaabka iyo wixii la mid ah. Xitaa haddii in madaxeeda ayaa aaminsan in ay noqon qadiimka, iyadu waxay qalbigeeda kaliya wuu dhalaali doonaa, iyo in loo halkaas waxaa muhiim ah in aad leedahay saamayn ah!
Sii inay bixiyaan - Tani runtii waxay la xidhiidhsan yihiin kor ku xusan. Wax kasta xaliso-upka aad ka qabto bixinta ayaan waxaan soo jeedin iyaga aad dhacdo iyo lacagta haddii aad rabto in aad fikrad wanaagsan. Ma rabtaa inaad ogaato sababta? Akhri maqaal ku saabsan cidda ay tahay in ay taariikhda ugu horeysay.
Iyada bogaadin (laakiin aan aad u badan) - Yaryar A, bogaadin dhab ah u dhaco sida aad u dheer in ay qof dumar ah oo wanaagsan dareento, iyo dhalaali kara xitaa wadnaha qabow. Si kastaba ha ahaatee, Iska dul-qabanayaan. Waxaad ku iman karaa guud ahaan darro haddii eray walba kale oo afkiinna ka baxa waa ammaan ah.
Isticmaal xiiso leh si uu u jabiyo barafka - Dating noqon kartaa waayo-aragnimo ah mid kacsan iyadoo aad helayso in ay ogaadaan iyada si jebin barafka ku talo jiro wax gacmaha iyo madadaalo, halkii taariikhda bar xiisad buuxsantay ama casho taasoo noqon kartaa wax badan oo kale wareysiga shaqada! Tag halkan: fikrado shukaansi gaarka ah qaar ka mid ah fikradaha weyn oo halkan ka akhriso: qorsheeyo ah taariikhda yaab leh ugu horeysay si aad u ogaato sida loo dhiso xiriir.
Dhis xiisad - Dhismaha xiisadda iyo kordheen galmada waxaa la tijaabiyey oo farsamooyinka in mudo dheer ayaa la isticmaalaa si ay dadka ugu kordhin jiidashada leh qof dumar ah oo ay jecel yihiin. Tani ma aha macnuhu in aad noqoto cayayaan galmo ah, Si kastaba ha ahaatee xoogaa kaftan ah, shukaansi cayaar ah kartaa waxyaabo run ahaantii kulul ilaa. Theft, waa hab fiican oo in la dhiso chemistry galmada ilaa iyo inta ma aha talax. Waxaan mar taariikhaysan nin oo loo isticmaalo sida habka ugu muhiimsan ee uu si ula dhaqma qof dumar ah. Markii hore waxay ku madadaalo, laakiin ka dib saacad ama labo saacadood waxa ay tahay mid daal Cad ah. Sidoo kale, qeyb ka mid ah dhismaha xiisad waa in loo ilaaliyo naftaada iyo madaxbannaanida, xitaa marka aad dhacaan naag.
Iska ilaali Kuwani Guddomiyaha Ururka Dating
In la whiney - Dadka sida xad-dhaafka yus ku saabsan waxyaabaha jira leexadka noocan ah off. Halis ah. Hubi in aad la xidhiidhi karaa haddii aad taqaan qof waqtiga oo dhan moans baan ahay. Waxaad u malayn kartaa in aan idiin yahay, Si kastaba ha ahaatee, hubi kaliya galay in. Mararka qaarkood waxaan la taahaa iyo yus aan xitaa aadanba. Ma jeceshahay inaad ka cabato la haweenkiinna? Ma waxaad la taahaa ku saabsan: cimilada, shaqadaada, gobolka of dhaqaalaha, haweenka aad taariikhda? Fursadda haddii aad markaas u qaban saaxiibadaa waxa aad sameyn lahayd marka aad shukaansi, oo si dhab ah gelin kara qof dumar ah oo ka baxsan. Bararugtay waxa aad ka hadleynaa on taariikhaha aad, iyo luqadda aad ku isticmaalayso.
Tusida amni-weyn - OK si aynu wada leeyihiin gelyo xumada qaarkood, oo waxaan ka mid ma ihi, waayo, weelaynta ilaa dareen, Si kastaba ha ahaatee taariikhda marka hore ma aha meesha in hawada la-darrada ah ee ku saabsan haddii aad tahay soo jiidasho inay galmo ka soo horjeeda, maxaa yeelay, waxaan kuu xaqiijinayaa in aad ma noqon doonto, haddii aad samayn in! Naagtii ayaa u cajiib ah laga yaabaa in ay endearing si kastaba ha ahaatee in uu noqon doono laga tirada badan yahay halis ah. Dumarka intooda badan tani waxay yeelan doonaan noo qabow ordaya. Waxaan mar taariikhaysan nin oo bilaabay i weydiiyay hadii aan u maleeyey inuu ahaa jiidasho maalinta ugu horeysa ee, iyo habka ayuu i tusay waxaa la socda meel amni-darrada. Wuu diiday inuu hoos u. Waxa uu hayo wax iga weydiinayay, ma waxaan ka heli isaga soo jiidasho? Markaasuu wuxuu bilaabay oo wuxuu yidhi waxaa jiray dhibic shukaansi lahayn haddii aan heli kari waayay jiidasho iyo waxa uu helay arrin qosol badan oo ku saabsan. Runta waxa ay ahayd in aan weli yeelanayay maskaxdaada sida aan dareemay (xusuusan jiidashada kala duwan u shaqeeya na dumarka) Si kastaba ha ahaatee iyadoo mar kasta oo uu xusay waxaa ii soo jiidashada dhaadhacay. Si tayo leh, wuxuu iska hadlay out of qaadan taariikhda kale. Ka shaqee arrimaha aad ee therapy, ama guriga naftaada by, ma on taariikhaha aad. Sidoo kale xusuusnow - gelyo xumada iyo dareenka ay ka duwan yihiin!
Bitching ku saabsan ex - Tani waxay ii ah waa mid ka mid ah dembiilayaasha ugu xumaa oo ii off nin fiican ka badan shukulaatada kala firdho, maalin kulul dhakhso gelin doonaa. OK, si aad hore ayaa laga yaabaa inuu ugu weyn b * tch ee dunida oo dhan, iyo xagga bidixdaba aad jebiyey oo xigmad leh shan carruur ah inay soo qaadaan, laakiin naagtii aad shukaansi ma waxaad weli ogayn. Haddii aad bilowdo xun mouthing hore ayay uga Warramaynaa dheeraad ah si aad hore ka badan si aad u. Sidoo kale ayay ka welwelin doona oo ku saabsan xukummada aad ka dhigi doonaa kuwa ku saabsan. Barbaarinta hore ee subaxnimadii hore ee in shukaansi waa uun qaab xun oo gebi ahaanba loo baahnayn (dhab ahaantii waxaan ka dhigi kiis wanaagsan iyagoo aan keenin hore ee aad xidhiidhka galay weligaa!) Waxa muhim waa qofka aad tahay NOW, iyadoo gabadha hortaada.
Lahaanshaha baaritaan ugu waaweyn xaliso (kuwaas oo u eg calamada casaanka noo!) - Eeg kor ku xusan oo dhan. Baaritaan Sur sidoo kale ka mid ah dubbeyn karo oo ku saabsan taariikhaha laga cabsado aad ku jirtay, cabaneyso in iyadu ma kuugu yeedhay, maxaa yeelay waxa ay ka dhigeysaa inaad dareento ammaan ahayn, slagging off dhan taariikhaha aad ku jirtay, barooranaya oo ku saabsan bixinta biilka iwm. Waa wakhti ay ku qortid surwaal wiil weyn ku. Mararka qaarkood nolosha arki kartaa cadaalad darro, laakiin haddii aad rabto in aad ka hor ee ciyaarta shukaansi ugu heli mararka qaarkood aad kaliya in ay u nuugaan! Haddii kale waxaad kaliya digsida doonaa in Casiir adiga kuu gaar ah. Waxaan rajeynayaa in aad doorato in ay jiraan bax, dhibicda-xaliso baaritaan oo kaliya raaxaysan shukaansi for fun ah, aan la saadaalin karin, iyo mararka qaarkood waayo-aragnimo waalan waxay noqon kartaa.
Iyo in dhamaadka ...
Illoobin wax kasta ka sarreeya oo kaliya naftaada noqon! - Haa Runtii maan odhan kaliya in. Barashada iyo ka dib liisaska tilmaamaha mararka qaar ka dhigi kartaa inaad adag iyo adaanaha on taariikhaha aad. Sidaas halka way weyn tahay in ay akhriyaan talo iyo waxa la isla dhexmarayo in ka badan in ay u ogalaan inay u tiimban, ha ka welwelin saabsan helitaanka waxa ku qumman. Qaado talo shukaansi dhan tilmaan ahaan halkii ay waajib sixun. Isku day inaad wax ka soo naftaada iyo dhammaan ayuu ka sarreeyaa xasuuso inaad kaliya ku nastaan ​​kuna raaxaystaan!